Nnwom 136 NA-TWI - Aseda dwom - Monna Awurade ase efisɛ - Bible Gateway
Nnwom 135Nnwom 137
Nnwom 136 Nkwa Asem (NA-TWI)
136 Monna Awurade ase efisɛ oye; n’adɔe wɔ hɔ daa. 2 Monna nea ɔso sen anyame nyinaa no ase; n’adɔe wɔ hɔ daa. 3 Monna awuranom mu tumfoɔ no ase; n’adɔe wɔ hɔ daa. 4 ɔno nko ara na ɔyɛ anwonwade; n’adɔe wɔ hɔ daa. 5 Ne nyansa mu na ɔbɔɔ ɔsoro; n’adɔe wɔ hɔ daa. 6 Ɔbɔɔ asase wɔ nsu a emu ware so; n’adɔe wɔ hɔ daa. 7 Ɔbɔɔ owia ne ɔsram, n’adɔe wɔ hɔ daa. 8 Owia sɛ ɔnhyɛ adekyee so; n’adɔe wɔ hɔ daa; 9 na ɔsram ne nsoromma nhyɛ anadwo so; n’adɔe wɔ hɔ daa. 10 Okum Misraimfo mmakan; n’adɔe wɔ hɔ daa. 11 Odii Israelfo anim fii Misraim; n’adɔe wɔ hɔ daa. 12 Ɔnam ne nsa a ɛyɛ den ne ne basa a tumi wɔ mu no so; n’adɔe wɔ hɔ daa. 13 Ɔpaee ɛpo Kɔkɔɔ no mu; n’adɔe wɔ hɔ daa. 14 Odii ne nkurɔfo anim ma wɔfaa mu; n’adɔe wɔ hɔ daa. 15 Nanso ɔmaa nsu no faa Misraimhene ne n’asraafo; n’adɔe wɔ hɔ daa.